Soomaali lagu xiray dalka Masar – Radio Muqdisho
Ciidamada ammaanka ee dalka Masar ayaa xabsiga dhigay muhaajiriin isugu jira Afrikaan iyo Carab tahiibayaal ah oo ay ku jiraan dad Soomaali ah.
Dowladda ayaa ku warrantay in dadkaan ay u kala dhasheen waddamada Soomaaliya, Suudaan, Eretria, Eithiopia, Falastiin iyo Syria. Dadkaaan ayaa doonayay in ay ka tahriibaan magaaladda Xeebta ah ee Alexandria ee dalkaasi Masar.
Soomaalida ku nool magaaladda Qaahira ayaa xaqiijiyay in la xiray 30 ruux oo isugu jira rag iyo dumar Soomaaliyeed.
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR iyo safaaradda Soomaaaliya ee dalka Masar oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay in xabsiyada dalka Masar ay ka sii daayaan dad badan oo Soomaali ah oo horay loo xiray xilli ay doonayeen inay tahriibaan.
Muungaab: “Shacabku ha la shaqeeyaano hay’adaha ammaanka”